पसिनाको मूल्य खोज्दै माइतीघरमा उखु किसानहरू - Online Majdoor
पसिनाको मूल्य खोज्दै माइतीघरमा उखु किसानहरू
रमेश लम्साल÷अशोक घिमिरे
जनगायक जीवन शर्माको ‘बूढो किसान’ गीतमा भनिए जस्तै सर्लाही धनकौलका ६० वर्षीय सीताराम महतो १२ दिनदेखि आफ्नो पसिनाको मूल्य खोज्दै राजधानी काठमाडौँ आउनुभएको छ । वर्षदिनभरि मिहिनेत गरेर लगाएको उखुको मूल्य नपाएपछि महतोसँग सङ्घीय राजधानी आउनुको अरू कुनै विकल्प भएन ।
सिंहदरबारले आफ्नो पीडा सुनिदेला र उखुको मूल्य पाइएला भनेर माइतीघर मण्डलामा सबेरैदेखि भेला भएर विरोधको स्वर सुनाएको दुई हप्ता पुग्न लाग्यो । तर हालसम्म महतोको आवाज सुनिदिन कुनै सरकारी अड्डा तयार देखिँदैनन् ।
सर्लाहीको अन्नपूर्ण चिनी मिलले विगत तीन वर्षदेखि आफ्नो पसिनाको मूल्य नदिएको भन्दै गुनासो सुनाउन माइतीघर मण्डलमा धर्नामा बस्नु मेरा लागि खुसीको विषय पक्कै होइन । फुलेका दाह्री सुम्सुम्याउँदै, लामो श्वास खुइँय गर्दै उहाँले भन्नुभयो, Fउद्योगले रु. ५५ हजार दिनै बाँकी छ, यसपटक उद्योगलाई उखु दिऊँ कि नदिऊँ, सरकारलाई मेरो प्रश्न छ ।”
उखु मिलले पैसा नदिएको भन्दै गुनासो गर्न काठमाडौैँ आउँदा महतोलाई रु. पाँच हजार ऋण लाग्यो । लगाएर आएको धोती मैलो भयो । धोती फेर्ने पैसा नभएपछि सतुङ्गलमा कवाडी सञ्चालन गर्ने गाउँकै साथीले ‘पाइन्ट’ सापटी दिएको महतोले सुनाउनुभयो ।
उखुको मूल्य माग्दै उद्योग धाएको निकै नै भयो । उद्योग सञ्चालक बन्द गरेर बेखबर छन् । उहाँले भन्नुभयो, Fएक दिन त उद्योगका कर्मचारी भेटिए तर अर्को दिनदेखि कार्यालय नै बन्द भयो ।” उखुको पैसा नलिई घर नफिर्ने दृढ अडानमा हुनुहुन्छ, महतो । तर सहजै पैसा हात पर्ने अवस्था भने देखिँदैन ।
सर्लाही हरिवनका ४० वर्षीय जितन यादवको पीडा पनि महतोको जस्तै छ । श्रीराम सुगर मिलले दिएको सास्ती कसलाई सुनाउने भन्ने द्विविधामा देखिनुभएका यादवले भन्नुभयो, Fहाम्रो पीडा काठमाडौँले सुन्छ कि भनेर यहाँ आएका हौँ । तर अहिलेसम्म हाम्रो गुनासो कसैले सुन्नै चाहेन ।”
आफूले अहिले पनि पाँच कठ्ठामा उखु खेती गरेको विवरण सुनाउँदै यादवले भन्नुभयो, Fयसपटक उखु काट्ने बेला भएको छ, काटाँै कि नकाटौँ, द्विविधामा छु ।” महतो र यादवजस्तै उखुको मूल्य खोज्न काठमाडाँै धाएका सर्लाहीका किसान आगामी दिनमा कुनै हालतमा उखु खेती नगर्ने सोचमा छन् । सर्लाहीको अन्नपूर्ण चिनी मिल र महालक्ष्मी सुगर प्रालिले १० वर्षदेखि उखुको रकम भुक्तानी गरेका छैनन् । तीन वर्षदेखि उखु किसान सङ्घर्ष समिति गठन नै गरेर स्थानीय क्षेत्रमा आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
रामनगर गाउँपालिकाका मायाशङ्कर यादव मिलले उखुको भुक्तानी नदिएपछि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको गुनासो गर्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार करिब पाँच हजार किसानले चिनी मिलबाट करिब रु. ८१ करोड भुक्तानी लिन बाँकी छ । अन्नपूर्ण चिनी मिलले रु. ६० करोड र महालक्ष्मी मिलले रु. २१ करोड किसानलाई भुक्तानी गरेका छैनन् । भुक्तानी नपाएपछि किसानले सो मिलमा ताला लगाएका छन् ।
उखु किसान सुखलाल सहनीले पटकपटक स्थानीय तहमा सहमति गरे पनि आफूहरूले उखुको भुक्तानी नपाएपछि यहाँ आएर आन्दोलन गर्नुपरेको दुखेसो गर्नुहुन्छ । उखु किसान, उद्योगी र सरकारी अधिकारीबीच गत भदौ मसान्तभित्र किसानको बाँकी बक्यौता भुक्तानी गर्ने सहमति भए पनि पछिल्लो समय उद्योगी सो सहमतिबाट भागेका छन् ।
सरकारले निर्धारण गरेको प्रतिक्विन्टल रु. ५३६ लाई उखु मिलले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र उखुको तौलमा प्रतिक्विन्टल २० प्रतिशतसम्म सुख्खाकटीको नाममा काटिएको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने किसानको माग छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय उद्योगी फेला नपरेको बताइरहेको छ । उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट किसानलाई भुक्तानी नदिएर हैरान पारेका उद्योगीको खोजी भइरहेको बताउनुहुन्छ । यो कुरा उखु किसानलाई पटक्कै विश्वास छैन् । विगतका सहमति कार्यान्वयन नभएकोले आन्दोलनमा उत्रनु परेको किसानको भनाइ छ ।
Fविगतदेखि नै किसानको बक्यौता भुक्तानी दिन बाँकी छ, किन बर्सेनि उखु किसानको समस्या दोहोरिन्छन्, उद्योगीले किसानसँग उखु लिन्छन्, चिनी उत्पादन गरेर बिक्री गरेका छन् तर उनीहरूले किसालाई भुक्तानी नदिएर ठूलो घात गरेका छन् । यसको तत्काल छानबिन गरिनुपर्छ”, सांसद वलीले सोमबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद वृशेषचन्द्र लाल ‘यो देश किसानको हो कि होइन’ भन्दै प्रश्न गर्नुहुन्छ, Fयदि यो सरकार किसानको हो भने किसानले खेती गर्छ, उत्पादन गर्छ तर किन मूल्य पाउँदैन ?”
अझै पनि विभिन्न उखु उद्योगले किसानलाई करिब रु. एक अर्ब ४० करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ । किसानले सरकारका तर्फबाट पाउने एक अर्ब ३४ करोड अनुदान पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । महालक्ष्मी सुगर मिल्स, श्रीराम सुगर मिल्स, एभरेस्ट सुगर मिल, हिमालयन सुगर मिल, बागमती, अन्नपूर्णलगायत चिनी उद्योगले किसानलाई ठूलो मात्रामा उखुको भुक्तानी दिन बाँकी छ ।